Wmv in Converter MP4: Sida loo badalo wmv in MP4 Si fudud ku Mac / Win
Sida loo Beddelaan wmv in MP4 fudayd ee Win / Mac (Yosemite ka mid ah)
Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in aadan ka ciyaari kara faylasha wmv aad on your iPhone / iPod / iPad, ama aad PSP iyo MP4 ciyaaryahanka. Qaar ka mid ah dadka isticmaala Mac, wmv ma aqoonsan iMovie, Pro Goo Final, oo aan lagu ciyaari karin ciyaaryahan QuickTime. Sidee si ay u xaliyaan dhibaatada? Halkan waa xalka. Waxaad si fudud u bedeli karaan wmv in MP4, kaas oo ah qaab socon sare. Maqaalkani waxa uu ku siin doonaa fursadaha kala duwan ee wmv in Converter MP4.
Qeybta 1: Best wmv in Converter MP4
Qeybta 2: wmv Free in MP4 &
Qeybta 3: Online wmv in Converter MP4
Qeybta 4: Extended Knowlege u wmv iyo MP4
Beddelaan inay qaabab video kala duwan, sida MP4, wmv, MKV, AVI, MOV, iwm
Horena Optmized qalabka kala duwan, sida iPhone, iPad, Samsung, iwm
Ku kab videos la sifooyinka tafatirka classic, sida falinjeeerka, qoqobada, isagoo intaa ku daray Cinwaan ama saamaynta, iwm
Sida dhaqsaha badan ugu xawaaraha diinta, aad shaqo si habsami Wabiyaalkii.
Taageerada Qaabka Wide
ay taageerto diinta video kala duwan iyo files audio. Just jiidi kasta oo aad file galay Converter iyo bilowdo qaab beddelidda.
Presets Optimzed u Qalabka
verison ayaa Pro kuu ogolaanaysaa inaad badalo qalabka kala duwan oo aan arkeyn waxa qaabab waxaa taageera qalabka aad.
Speed ​​Conversion sida dhaqsaha badan
Waxaa loogu badalo videos at 30X xawaare ka dhaqso badan wax converters kale majoy on suuqa.
Just qaadan wmv si MP4 video Converter in ay sameeyaan filim Hollywood cajiib ah si ay u muujiyaan saaxiibadaa.
Maqaalkani waxa uu kuu sheegi doonaa tutorial ah tallaabo-tallaabo ku salaysan ay version Windows. Waxaad ka heli kartaa tutorial ee Mac (Yosemite ka mid ah) halkan .
Tallaabada 1 Import wmv gudbiyo galay wmv si Converter MP4
Ka dib markii download iyo gashato, waxaad straightforwardly jiidi karaan jeedi files wmv si aad u software ah, ama waxaad riixi kartaa "Add Files". Siinta shaqo ee diinta Dufcaddii, sidoo kale waxaa aad loo ogol yahay in lagu daro dhowr files warbaahinta diinta. By jidkii, wmv si Converter MP4 (Windows 8 taageeray) si dhab ah ayaa taageero ballaadhan qaab oo aad awood u si loogu badalo wax video dhammaan qaabab loo jecel yahay sida aad rabtid.
Tallaabada 2 Dooro sida qaab wax soo saarka MP4
Fur liiska qaab of app this dhinaca midig ee interface ugu weyn, ka dibna dooro "MP4" qaybta "Video". Haddii aad qorshaynaysid in uu ciyaaro ee la gediyay files MP4 on iPhone , iPad, iPod, PSP, Blackberry, HTC ama aaladaha kale ee caanka ah, waxaad dooran kartaa presets u bixiyey si aan loo baahnayn in ay qarka u saaran xallinta, heerka jir iwm iskaa . Just tagaan si ay category Device in ay doortaan dhiganta qalabka halkan.
Ka sokow function qaab beddelidda, wmv si MP4 video Converter si dhab ah siisa qaar ka mid ah hawlaha edit waxtar leh si aad u hagaajisid videos by beerista, codsanaya saamaynta qabow iwm
Hit badhanka "Beddelaan". Markaasuu inta kale ee diinta waxaa si otomaatik ah oo si deg deg ah la gaadhay lahaa. Video Converter The (Windows 8 taageeray) shaqaynayso in Windows 8/7 / XP / Vista. Leeyihiin waayo-aragnimo warbaahinta fiican.
Video Tutorial: Sida loo Isticmaalo wmv in ay MP4 Video Converter for Windows
Qeybta 2: wmv Free in Converter MP4 & Online wmv in Converter MP4
1. Free wmv in MP4 Video Converter: Wondershare Video Converter Free
Waa wmv wejiyo in MP4 video Converter. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad badalo videos in qaabab kala duwan, xaalkaa videos by falinjeeerka, lana siii, isagoo intaa ku daray saamaynta, iwm iyo sidoo kale aad u isticmaali kartaa si downlad videos ka goobo badan. Waxaa gebi ahaanba waa 100% free video Converter.
Qasaarooyinka: Haddii aad rabto in aad u isticmaasho si ay u gaaraan caadi ah aad video diinta, wmv lacag la'aan ah si ay Final Cut Pro video Converter noqon kartaa doorashada ugu fiican ee aad. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto in aad ugu wanaagsan ee tayada video wax soo saarka iyo super si degdeg ah xawaaraha diinta, Video Converter Ultimate noqon doonaa dooqa koowaad.
Qeybta 4: Aqoonta Extended u wmv iyo Qaabka MP4
Wmv (Windows Media Video) waa qaab video riixo ah. Qaab Tani streamable taageertaa dhammaan noocyada kala duwan ee multimedia. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad isu geeyo durdurrada multimedia kala duwan galay mid ka mid file hal. MP4 waa qaab weelka loo isticmaalaa in lagu kaydiyo video, audio, iyo xogta subtitles ah. Tan iyo dukaamada sida Lugood isticmaalaa qaab weel, waxaa loo isticmaalaa la iPod iyo Playstation (PSP). Waxa uu noqdo qaab caan ah.
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qaab file wmv ah
Sida loo Beddelaan wmv in MOV (Quicktime)
Sidee ku cadaadisaa wmv Files
sida loo ciyaaro wmv Faylal ay ku OS X Yosemite
Top 6 xiisaha badnaa YouTube Videos of 2011
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan wmv in MP4 fudayd ee Win / Mac (Yosemite ka mid ah)